Tsara, saingy… | NewsMada
Par Taratra sur 07/06/2019
Ao anatin’ny fanovana tanteraka ny fitondram-panjakana, amin’izao fotoana izao. Raha ny marina, miankina amin’ny toe-tsaina ny zava-drehetra. Mba hisian’ny filaminana eny an-dalambe, any anaty fiarahamonina, any anaty fiara fitateram-bahoaka, sns, tokony ho samy tompon’andraikitra ny tsirairay ary tokony handeha ho azy ny fanajana ny lalàna velona. Io toe-tsaina io mihitsy anefa no niova sy potika, raha tsorina, hany ka tsy maintsy hentitra ny fanjakana ary alefa mihitsy ny mpanara-maso, toy ny mpitandro filaminana.
Tsikaritra, ohatra, tato anatin’ny andro vitsivitsy izay, ny fisian’ny polisy eny amin’ny manodidina ny fiantsonan’ny taksibrosy, eny Andohatapenaka. Napetraka ho manara-penitra ity toerana ity kanefa, fotoana vitsy monja, nibaribary ny gaboraraka, toy ny tsena tsy ara-dalàna sy ny mpivarotra amoron-dalana ary, indrindra, ny loto.
Rehefa miasa eny ny mpitandro filaminana, niverina tamin’ny laoniny ny toerana. Hita kokoa ny filaminana. Etsy ankilan’izay anefa, mimenomenona ireo voakasiky ny fanadiovana. “Aiza ny fitsinjovana anay madinika? Inona indray ny mba fidiram-bolanay?”, hoy izy ireo. Manatsara zavatra ny fepetra noraisina, saingy heverina fa tokony hampiarahina tamin’izany ny fitadiavam-bahaolana momba izay fidiram-bolan’ireto olona ireto.
Fotoana vitsy lasa izay, nampahatsiahivin’ny tompon’andraikitra ny tsy tokony hivezivezen’ireo kalesa sy posy mpitatitra entana, amin’ny fotoana mahatery ny fifamoivoizana. Tsy vitsy ny nankasitraka izany, satria iaraha-mahalala ny fitohanan’ny fifamoivoizana, izay hita indraindray fa avy amin’izy ireny.
Tsy ireo mpitatitra amin’ny sarety na ny posy irery koa anefa no fototr’ity olana ity fa eo koa ireo fiara miantsona sy mibahana eny an-tsisin’ny arabe eny, ny mpanamboatra moto, ny mpivarotra, sns. Ahoana ny mahakasika azy ireny fa toa mandeha ila ihany ny fepetra noraisina?
Miteraka resabe, any anaty tambajotran-tserasera any, ny fanaovana ilay “permis biométrique” vaovao. Nirodorodo vao maraina ny olona, saingy efa antoandro vao nilaza ny tompon’andraikitra fa 40 ihany no horaisina. Niveri-maina ireo efa nijoro ela sy niaritra ny hatsiaka teo. Tsara sy tena ilaina ny fampanarahan-dalàna, saingy tokony hiara-dalana amin’izany ny fahaiza-mandamina mba tsy hisian’ny “fatiantoka” ho an’ny vahoaka. Ny fotoana, hono mantsy, volamena!